XOG: Cristiano Ronaldo & Mohamed Salah Oo Ka Maqan, Lionel Messi Oo Laga Sareeyo Iyo Tobanka Xidig Ee Hogaaminaya Gool Dhalinta Sanadkan 2019 . - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
XOG: Cristiano Ronaldo & Mohamed Salah Oo Ka Maqan, Lionel Messi Oo Laga Sareeyo Iyo Tobanka Xidig Ee Hogaaminaya Gool Dhalinta Sanadkan 2019 .
October 8, 2019 at 21:08 XOG: Cristiano Ronaldo & Mohamed Salah Oo Ka Maqan, Lionel Messi Oo Laga Sareeyo Iyo Tobanka Xidig Ee Hogaaminaya Gool Dhalinta Sanadkan 2019 .2019-10-08T21:08:22+01:00 CAYAARAHA
Tartanka gool dhalinta ciyaartoyda ayaa loo xisaabiyaa laba qaab oo kala duwan, waxayna kala yihiin mid abaal marino lagu bixiyo iyo mid sumcad kaliya lagu helo aan lahayn abaal marino u khaas ah.
Tartanka gool dhalinta kabta dahabka ah ee horyaalada iyo qaarada Yurub waxaa lagu xisaabiyaa xidiga goolasha ugu badan dhaliyo inta uu xili ciyaareedku socdo laakiin waxaa markale ciyaartoyda lagu qiimeeyaa goolasha ay sanadkii dhaliyeen.
Haddaba waa kuma xidiga ilaa hadda gool dhalinta sanadkan ee horyaalada Yurub hogaaminayaa? Waxaa jira ilaa 10 xidig oo haysta fursada ay sanadkan 2019 ugu tartami karaan gool dhaliyaha Yurub ugu sareeya.
Caadiyan marka kabta dahabka ah ee Yurub ama horyaalada lagu tartamayo waxaa la xisaabiyaa goolasha ay ciyaartoydu ka dhaliyaan kulamada horyaalada ay ka tirsan yihiin oo kaliya.
Laakiin marka la qiimaynayo gool dhaliyaha sanadka ugu wanaagsan waxaa lagu qiimeeyaa tirada guud ee goolasha uu ka dhaliyay dhamaan kulamada tartamada oo dhan.
Xidiga kooxda Bayern Munich iyo xulka Poland ee Robert Lewandowski ayaa ilaa hadda ah hogaamiyaha shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayn ee sanadkan 2019 goolasha ugu badan soo dhaliyay.
Lewy ayaa haysta 33 gool oo uu sanadkan 2019 ku soo dhaliyay 33 kulan oo tartamada oo dhan ah, waxaana culayska soo saaraya Lionel Messi oo 2019 kulamada oo dhan ka soo dhaliyay 31 gool inkasta oo uu soo saftay 35 kulan intii uu sanadkan 2019 socday.
Sergio Aguero iyo Karim Benzema ayaa min 26 iyo 25 gool ugu jira kaalmaha saddexaad iyo afraad sida ay u kala horeeyaan.
Aubameyang, Sadio Mane iyo Raheem Stelring ayaa qayb ka ah tobanka xidig ee ilaa hadda goolasha ugu badan ka soo dhaliyay sanadkan 2019 oo lagu sii dhawaanayo dhamaadkiisa.
Laakiin Cristiano Ronaldo iyo Mohamed Salah ayaan ka soo muuqan tobanka ciyaartoy ee sanadkan 2019 goolasha ugu badan ka soo dhaliyay Yurub.
Sidoo kale Neymar Jr, Eden Hazard, Luis Suarez, Griezmann, Roberto Firmino iyo gool dhaliyaal badan ayaan ka soo muuqan tobanka xidig ee gool dhalinta 2019 ugu sareeya.
Halkan kaga bogo xogta 10 ka ciyaartoy ee shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayn goolasha ugu badan ka soo dhaliyay 2019 iyo mid kastaaba inta uu haysto.
Haddaba akhriste,xidgeed filaysaa in uu sanadkan 2019 ku dhamaysan doono kaalinta kowaad ee gool dhalinta horyaalada Yurub ugu waa wayn?.
« Gudoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti oo booqday beeraha Baydhabo (SAWIRRO)
Kaddib guurkii Serena Williams maxay tahay su’aasha ugu badan oo ay Saxaafaddu weydiinayso xiddigtan? »